‘सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिए समृद्धि गौरादहको सपना पूरा हुन्छ’ - Jhapa Online
नेकपा नेता नगेन्द्र भण्डारीले २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा अघिदेखि नै अखिल विद्यार्थी संगठनबाट सक्रिय राजनीतिक जीवन शुरु गर्नु भएको हो । गौरादह नगरपालिका वडा नं. १ बाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई हाल नगर प्रवक्ताको पदमा हुनुहुन्छ । भण्डारी नगरपलिकाका जनप्रतितिधिहरु बीच सदैव नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रिय पात्र मानिने भण्डारी विधि र पद्धतिको जगबाट मात्र नगरलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विस्वास राख्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ झापा अनलाइनका सम्वाददाता सान नेपालले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानी–
नगरमा बहुमतका आधारमा नगरप्रमुखलाई नै वाइपास गरिँदैछ नि !
निर्वाचन जितेपछि हामी सबै जनताका साझा प्रतिनिधि हौँ । हामीले मेयर सावलाई वाइपास गरेका छैनौँ र गर्दैनौ पनि । हामी पद्धतिमा चलौँ भन्दा उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न खोज्न हुन्छ जुन कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यस्तो कुरालाई वाइपास भन्न मिल्छ र ?
प्राय गौरादहमा जनप्रतिनिधि बीच विवाद चलिरहन्छ, के कारण हो ?
गौरादहलाई कसरी समृद्ध गौरादह बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार नमिलेको हो । हामी भन्छौँ ५ वर्षमा गौरादहलाई कस्तो बनाउने (गुरुयोजना) रोडम्याप तैयार गरौँ, यहाँका गौरवका योजनाको छनौट गरौँ । कृषि, पर्यटन, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको खाका निर्माण गरौँ । दीर्घकालीन योजनाहरु तयार गरौँ । स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार भित्र रही ऐन, नियम, कार्यविधी निर्माण गरी चलौँ हामी भन्छौँ । तर, केही जनप्रतिनिधि आफ्नै ढंगबाट काम गर्न खोज्नु हुन्छ । त्यसैले विवाद आइरहन्छन् ।
गौरादह हरेक हिसाबले अन्य स्थानीय निकाय भन्दा कमजोर छ । जनताको आसा भरोसाको सपना कहिले विपनामा परिणत होला ?
कतिपय प्रसंगमा कमजोर छौँ । होला तर पनि विगत एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य मात्रामा विकास निर्माणहरु सम्पन्न भएका छन् । आधारभूत तहका विकास निर्माणमा हामी दिन रात खटिरहेका छौँ । हामी सबैमा समृद्ध गौरादह निर्माण गर्नका लागि एकठाउँमा उभिएर हिँड्न सके जनता सपना र हाम्रो अभिभारा चाँडै पुरा हुनेछ ।
मेयर उपमेयर फरक फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, अन्य सवै ठाउँमा सहकार्य गरेर अगाडी बढिरहनु भएको छ । यहाँ किन भद्रगोल ?
निर्वाचनमा फरक फरक दलबाट जिते पनि साझा व्यक्ति हुनुपर्नेमा हुन नसक्नु पहिलो कारण हो । खासगरी प्रमुखले साझा प्रतिनिधिको रुपमा रहेर नेतृत्व गर्न नसक्नु अर्को कारण । केही समय भित्रमा जटिलता हटेर जाने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सधै विवाद गरेर जनताले चाहेको समृद्धि कसरी पूरा गर्नु हुन्छ ?
सधैँ विवाद गर्नु पनि हुन्न र गर्दैनौँ पनि । हामी सवैले आप्mना दम्वलाई त्यागी साझा धारणा बनाई काम गर्नुको विकल्प छैन । विवादित विषयलाई छलफलको माध्यामबाट निकास निकाल्न जरुरी छ । हामी ऐन नियम र कार्यविधी बनाउन नसक्दा धेरै समस्या र विवाद भएको हो । यि विषय तुरुन्त बनाई विधी सम्मत ढंगले चल्ने हो भने विवाद पनि हुदैन र काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ ।
अब समाधान कसरी हुन्छ ?
समस्या र चुनौतीसँग भागेर होइन छलफल, बहसबाट सबैको अपनत्व हुनेगरीको निष्कर्ष निकालेर आप्mना कमजोरीहरुको दोस अरुलाई नथुपारी आफुले भने जस्तो नहुँदा मैदानै खाली गरी नभागी सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आ–आप्mना हैसियत अनुसारको काममा हस्तछेप नगरी पारदर्शी ढंगले एकअर्काले काम गर्नुपर्छ । विधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने ढंगले काम गरी नगरपालिकाको आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका साथ आवश्यक ऐन, विनियम र कार्यविधि बनाई काम गरेमा सवै समस्याको समाधान हुनेछ ।